China SUPER SILENT Diesel wershedda GENERATOR SET warshad iyo alaab-qeybiyeyaal |EAGLE
30KW / 380V awood xoog leh, Biyaha qaboojinta naaftada afar silsiladood, Diritaan kuleyl oo hufan, Wax soo saarka xasilloon, Nidaamka xakamaynta xawaaraha elektiroonigga ah, Awood xoog leh, Qaab-dhismeedka adag, Cod-caddaynta, Aad ayey ugu habboon tahay isticmaalka dhismaha.
1. 100% matoor aan burush lahayn oo naxaas ah, habdhaqan aad u fiican iyo khasaaro hooseeya;Dhammaan naxaasta waxay leeyihiin iska caabin heerkul sare ah, barta dhalaalka sare, wax soo saarka xasilloon iyo awood ku filan.
2. Koronto-dhaliyaha is-kicinta, koronto-dhaliyuhu wuxuu qaataa magnet joogto ah si loo hubiyo in matoorku aanu lumin kicinta oo uu dhaliyo koronto muddo dheer.
3.Nidaamka garaadka tooska ah ee ATS wuxuu garwaaqsadaa bilaabista tooska ah iyo xiritaanka qalabka koronto-dhaliyaha, beddelka tooska ah, gaarsiinta tooska ah, la socodka xogta iyo ilaalinta alaarmiga, wuxuuna garwaaqsadaa "la'aan".
4.Gelitaanka hawada dhinaca iyo nidaamka qiiqa waxay ku qalabaysan tahay dabool hagaha hal dhinac oo sanduuqa ah.Hawada qiiqa waxay daajinaysaa gaaska iyada oo loo marayo booska hagaha hawada si loo yareeyo buuqa qiiqa unugga iyo soo noqoshada ciidda iyo siigada.Meelo badan oo hawadu soo geliso iyo kanaalada qiiqa waxay xaqiijiyaan awooda ku filan unugga.
5. Casriyeynta xasilloon, nolol buuq yar, oo si dheeraad ah ugu raaxayso jawiga raaxada leh ee hawo cusub.
Inta jeer ee la qiimeeyay(hz)
Wax soo saarka la qiimeeyay (kw/kva)
Awood soo saarista heeganka ah (kw/kva)
Danab la qiimeeyay (V)
Afar dhululubo, toosan, 4 istaroog, matoorka naaftada biyaha la qaboojiyey
Nidaamka bilawga ah
Saddex waji (caraash la'aan)
Ugu yaraan 8 saacadood
Daal* istaroog (mm)
Miisaanka qallalan (kg)
Dab-dhaliye Naafto ah Deji miiska raadinta
Wixii faah faahin ah, pls haka labalabeyn nala soo xiriir.
Hore: CODKA-CADEEYA IYO NAFTA NAAFTA EE LA DHAQAN KARO
Xiga: NAFTA ALUUMIUMKA Bamka Bamka SET
Qalabka Dhaliyaha Warshadaha